Kutyisa Kwakachena: 5 Yakanaka Bhodhi Mitambo NeZombies - Game Point - Bhodhi Mitambo uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 13, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, top list
Zombie bhodhi mitambo ndiyo imwe nzira yekurembera kunze pamberi peiyo telly. Vapenyu vakafa - unovaziva kubva mumafirimu, akatevedzana, mabhuku, makomiki nemitambo yemavhidhiyo. Uye vapenyu vakafa vagara vari chikamu chezvinyorwa mumitambo yebhodhi zvakare. Mukupesana neakawanda-dimensional screen adventures, iwo mutambo shanduro ane hunyanzvi uye anowanzo batira pamwe. Asi yakanaka zombie bhodhi mitambo haina iyo yakachipa runako rwemamwe mabhaisikopo asina kufa: Vanyori nevatsikisi vanowanzo buritsa mhando. Pazasi isu tinopa mishanu yakanaka zombie board mitambo.
Zombies dzinogamuchirwa pamabhodhi emitambo yenyika ino. Mushandirapamwe wekutsvaga mari yeZombicide offshoots, iyo muparidzi CMON akakwanisa kugadzira mamirioni mune iyi kesi, yagara ichiratidza izvi zvinokatyamadza. Saka nyaya yacho ndeyechokwadi inogara yakasvibira uye ndeye - chenjera! - kwete kuurayiwa. Iyo nhanho yekunetsa mumitambo ye zombie board inotangira kubva pakadzika kusvika kune yakanyanya kuoma, uye iwe unofanirwa kutamba yakanakisa solo. Zombies mumitambo yebhodhi - izvo zvinowanzoreva kurwa kwezvinhu uye diki. Zvakadaro, zvinoenderana nerudzi.
Dawn yeZeds inowanikwa muchiGerman kubva kuFrosted Games. Mufananidzo: Victory Point
Dawn yeZeds ikozvino yave muchinyorwa chayo chechitatu - uye haisati yarasikirwa nerunako rwayo mumakore kubva payakatanga muna 2011. Iro zita rinoonekwa nevateveri serimwe reakanakisa - kana asiri iwo akanakisa - zombie bhodhi mutambo zvachose. Munyori Hermann Luttmann (Munondo waStonewall, Pane Chero Mutengo) akagadzira iyo inenge yakakwana solo board game. Dawn yeZeds zvakare inotengesa hunhu hwayo hwemutambi mumwe chete. Mutambo imhando yeKufamba Yakafa mubhodhi yemutambo fomu. Castle Defense pfungwa, inoda chaizvo, yakanyanya thematic - Dawn of the Zeds ndiyo zombie movie mafaro pakati pemitambo yebhodhi.
Zvingango shamisa muchikamu chemusoro: Mutambo unosvika pasina chero zvidiki. Zvizhinji zvezviratidzo uye boka remakadhi, ndizvo chete zvaunoda padivi pebhodhi remutambo. Tichifunga nezvemazita ekukwikwidza akashongedzerwa, izvi zvinoita sekunge zvisina hanya, asi nekutamba Dawn yeZeds inobvarura kaviri nekatatu.
Dawn yeZeds ndeyekufungira kwakachena pamusoro pekureba kwayo kwemaminetsi e120. Kuchinja kusingatarisirwe uye kutendeuka pasina simba kunoita kuti kurudziro ienderere mberi. Zvinoshamisa kuti, kana iwe uchida kunyunyuta, unozviita munzvimbo yevazhinji yeDawn yeZeds. Izvo hazvina mutsauko kubva kune wega musiyano, zvirinani maererano nezviito, izvo zvinodaidzira mubvunzo kukosha kwakawedzerwa kukosha. Chero zvazvingava, mutambo wacho haukanganwiri chero kukanganisa, saka hausi kungofadza chete, asi kuoma kwakaoma. Mitemo yacho yakaoma, saka uchafanirwa kutora nguva kuti uijairire.
Dawn yeZeds inokurudzirwa kune 1 kune 5 vanhu vane makore gumi nemana uye kupfuura uye ine nguva yekutamba ye14 kusvika kumaminitsi e90.
Frosted Mitambo 28 - Kwayedza yeZeds * 81,72 EUR tenga
Kugara Zvakaipa 2: Iyo Bhodhi Mutambo
Mugari Zvakaipa 2: Iyo Bhodhi Game ndiko kuchinjika kwemutambo wevhidhiyo. Mufananidzo: Steamforged Mitambo
Mugari Zvakaipa 2: Iyo Bhodhi Game i zombie bhodhi mutambo wakanangwa zvakanyanya kune vateveri vevhidhiyo mutambo template. Steamforged Mitambo yakashandura mutambo wedhijitari unotyisa kuita "mutambo wepatafura" - uye vakazviita zvakanyanya. Kutarisa kunogutsa, mamiriro ekunze akarurama, ane hurongwa uye anoshandira pamwe. Iyo yekupedzisira kunyanya inopa iyo yekuwedzera chikamu chekunakidzwa mumitambo yebhodhi inosanganisira undead.
Mugari Zvakaipa 2: Iyo Bhodhi Mutambo ndeye kwakachena kupona kunotyisa. Izvi zvinotsigirwa nekushomeka kwezvombo, izvo vateveri vefranchise vanotoziva kubva kumitambo yemavhidhiyo. Ehezve, izvi zvakare zvine maitiro ehungwaru: Panzvimbo yekupfura mauto e zombies pasina kufunga senge mugomba rinokambaira, mutambo uyu uri pamusoro pehungwaru hunogona kufamba kurwisa vanopikisa. Pazvakanakisa, zombies anosiiwa ega pamberi pemikova yakavharwa.
Steamforged Mitambo yekumisikidzwa iri padanho. Resident Evil 2 semutambo wevhidhiyo zvakare Resident Evil 2 semutambo webhodhi. Musoro unoramba uchitaura tunyaya, nguva imwe neimwe patsva. A diki downer: hapana German-mutauro localized shanduro, vatambi vanofanira kushandisa yepakutanga Chirungu mutambo. Iri harisi dambudziko dai risiri remirairo, inotounza mibvunzo kune vatauri venzvimbo. Sezvineiwo, shanduro dzemafani dziripo. Asi izvo hazvivanze mhirizhonga, dzimwe nguva isina kukwana seti yemitemo. Kugadzira bhodhi mutambo zvakare kunotora nguva. Kujairira uye kutamburira kwakakodzera, zvisinei. Iko kashoma kuwanda kwemhepo uye kufara - uye kune kashoma mitambo yebhodhi yekupona zvakadaro
Mugari Zvakaipa 2: Iyo Bhodhi Game inokurudzirwa kune 1 kune 4 vanhu vane makore gumi nemana zvichikwira uye ine nguva yekutamba inotenderedza 14 kusvika zana nemakumi maviri maminetsi.
Steamforged Mitambo SFRE3-001 Resident Evil Accessories, Assorted,... * 85,72 EUR tenga
Zombies!!! yakabudiswa naPegasus Spiele. Mufananidzo: Pegasus Mitambo
Zombies!!! chinhu chikuru chaizvo. Mutambo webhodhi wakatanga kuburitswa muna 2001, uchiteverwa neshanduro yechipiri muna 2015. Chero ani anogona kuenderana nemafirimu akaita seEvil Dead achanakidzwawo neZombies !!! Todd naKerry Breitenstein. Vatambi vanotora chinzvimbo chevapukunyuki uye vanorwa nemhomho yeundead. Zvakawanda zvinokandwa, saka iro rombo rakanaka rinoenderana nekukwirira.
Chii chinonzwika kubatana chinoshanduka kuve chakasiyana zvachose patafura: ine zombies !!! panogona kuva nemukundi mumwe chete. Pakupedzisira akauraya zombies makumi maviri neshanu kana kusvika panzvimbo inoponesa yeherikoputa (kusanganisira iyo yekupedzisira kurwa kwemukuru). Kana iwe ukafa, zvinoenda - kwete Enda - uye zvakananga kudzoka pakutanga, iwe zvakare unorasikirwa nehafu ye "kuuraya" kwako. Iwe unogona kutowana icho chinhu chakanaka mune zombie genre. Dzima huropi uye ufuridze njere - ndiyo motto yezita iri.
Zombies!!! iri nyore zombie board mutambo, asi unonakidza. Kukanganisa inguva yekutamba, iyo yakati rebei. Zvakadaro: Muchikamu chakakodzera chekutamba, basa iri, iro rakavakirwa pamafirimu e zombie splatter, rinopa kunakidzwa nekuseka. Uye kune zvakawanda zvekushandisa. Zombies!!! yaive nhanganyaya kune yese nhevedzano yeZombies !!! kuwedzera. Imwe neimwe inosanganisira mitemo mitsva yemitambo uye makadhi.
Zombies!!! yakabudiswa naPegasus Spiele uye inokurudzirwa kune 2 kune 6 vanhu vane makore gumi nemaviri uye kupfuura. Mutambo unotora maminitsi makumi matanhatu kusvika makumi mapfumbamwe.
Pegasus Mitambo 54100G - Zombies 2nd Edition * 45,00 EUR tenga
Zombicide ndeyekirasi zombie bhodhi mutambo. Mufananidzo: Asmodee
Zombicide haingori mutambo webhodhi, ikozvino yave yakazara zombie horde zvakasikwa. CMON yakange yaunganidza mamirioni mazhinji emaeuro kuburikidza nechaunga chekutsvaga mari yemunhu ega Zombicide offshoots - uye mukuita izvi yakaramba ichisimudza mubati wegomba anokambaira mune dzimwe nyika dzine themed: sango, kumadokero, guta guru - ivo vasina kufa vari kutadza kwavo kwese. Iwe unoziva kuti kubva mufirimu uye terevhizheni, neZombicide iwe unogona kusangana nekusaomarara asi kunoda kuvhima vapenyu vakafa pabhodhi mutambo tafura kumba.
Zombicide inowanikwa muGerman kubva kuAsmodee. Midziyo yemutambo webhodhi inoshamisira, saka unofanirwa kuchera zvakadzika muhomwe yako kuti uitenge. Vatengesi vanobhadharisa maeuro makumi manomwe neshanu pamutambo, asi kune zvakare akawanda madiki, makadhi uye anosungirwa hunhu mabhodhi akagadzirwa epurasitiki, paunogona kumaka hunyanzvi hunoshanda uye mapoinzi ehupenyu nemabhatani madiki uye masiraidhi.
Zombicide inoshanda, inoda, asi ichine mitemo yakapusa inoda kutenderera kana maviri kuti ajaire. Kana iyo seti yemitemo iripo, hapana chinomira munzira yekunakidzwa. Vatambi vanounganidza magiya uye kukwidza mavara avo kurwisa undead mune ino classic zombie board mutambo. Pave nemakore gumi kubva pakatanga, asi yechipiri edition yakangoonekwa gore rapfuura (2021). Zombicide uye nhungirwa dzayo dzakatengesa mamirioni emakopi pasi rese - mutambo webhodhi saka zvakare budiriro yemari kune vatsikisi.
Zombicide yakaburitswa neAsmodee Germany. Inokurudzirwa kune 1 kusvika ku6 vanhu vane makore gumi nemaviri uye kupfuura uye inotora maminitsi makumi matanhatu.
Asmodee | cmon | Zombicide 2nd Edition | Basic game |... * 74,99 EUR tenga
Zombie Teen Evolution
Zombie Teenz Evolution ndiyo mhuri-inoshamwaridzika vhezheni ye zombie board mitambo. Mufananidzo: Asmodee
Zombie board mitambo haifanirwe kugara ichideura ropa - Zombie Teenz Evolution naAsmodee inoratidza izvozvo. Mutambo wemhuri-ushamwari ne "horror" theme yakatosvika pane rondedzero yevakasarudzwa kumutambo wegore 2021. Chimiro chacho chinobva pane izvo zvinozivikanwa kubva kumafirimu e zombie: vasina kufa vakakunda guta. Ikozvino zviri kune vatambi kuti vashande pamwe chete kutsvaga mushonga wekurwisa denda re zombie.
Mutambo webhodhi watove kuburitswa kwechipiri munhevedzano, i.e. inoteedzana neZombie Vana Evolution. Chinonyanya kukosha: Mutambo webhodhi unoshanduka nemutambo wega wega - saka izwi rekuti shanduko mumusoro harisi gimmick rakachena rekushambadzira. Kunyanya clou: iyo miviri yebhodhi mitambo yakaburitswa kusvika zvino yakazvimiririra, asi zvakare inoenderana nemumwe.
MuZombie Teenz Evolution, vatambi vanofanirwa kugadzira antidote kubva kuzvikamu zvina, saka zvinongedzo zvinofanirwa kutanga kuwanikwa. Chikwata chine mavara chinogona chete kukunda pamwechete. Zviitiko uye zvinodzokororwa zombies zvinochengeta zvinhu zvichinakidza, uye vatambi vanogona kutumidza magamba ivo pachavo. Zombie Teenz Evolution mujaho unopesana nenguva - kana zombies inogona kutora zvivakwa zvese, iyo idyll mutaundi diki ichapera.
Zombie Teenz Evolution yakagadzirirwa sebhodhi mutambo wemhuri yese. Vana vanokurudzirwa pamusoro pezvese nezvinogara zvitsva zvemukati: kuvhura mahamvuropu, kuvhura zvinhu zvitsva zvevatambi, kuita kune yakasarudzika zombie spawn - pane zvakakwana zvekuita. Uye chinhu chose chinotaridzika chinokwezva patafura yemitambo. Iwe unofanirwa kucheka pakadzika kwemutambo, neZombie Teenz Evolution inotarisisa iri pakukurumidza uye kusiri nyore kunakidzwa. Zvisinei nemirau yakapfava, hausi mutambo wega wega unopera mukukunda, zvechokwadi pane dambudziko.
Zombie Teenz Evolution yave budiriro inokatyamadza yeAsmodee. Pamwe chete neiyo Super RTL Toggo division uye pasi pe "Toggo Toys" label, kushambadzira kwemutambo webhodhi kunomhanya paterevhizheni.
Zombie Teenz Evolution mutambo wemhuri wevanhu 2 kusvika ku4 uye unokurudzirwa kune makore 8+. Mutambo unotora anenge maminitsi makumi maviri.
Asmodee | TOGGO Toys | Le Scorpion Mask | Zombie Teenz... * 17,49 EUR tenga
Kare Matatu eQ3: Asmodee inozivisa mamwe bhodhi mutambo magadzirirwo
Inotevera Star Wars Jedi: Akapona - zita reFallen Order 2?
New State Mobile: Crossover pakati pedu
Zelda - Skyward Sword yeNintendo Switch: Trailer inoratidza kuvandudzwa
Izvi ndizvo zvitsva kubva kuLEGO zve2019